Dr Abiy: 'Itoophiyaan jijjirama seena qabeessa irratti argamti' - BBC News Afaan Oromoo
Itoophiyaan ammaan tana jijjirama siyaasaa, dinagdeefi hawaasummaa seena qabeessa ta'e irratti argamti jedhan ministirri mummee Dr Abiy Ahimad haasawaa walgahii invastimantii G20 biyya Jarmanii irratti.
Akka Dr Abiy jedhanitti, biyyattiin sochii guddinaa walitti fuufaa fi hunda hammataa ta'e gaggeessaa jirti.
Haaluma kanaanis dhaabbile motummaa harka turan waldhakkaa isaanii gara qabeenyummaa dhuunfaatti geeddaruuf sochiin eegalameera jedhaniiru Dr Abiy.
MM Abiy walgahii Compact with Africa irratti hirmaatan
Fakkeenyaafis, dameewwan kanneen guddina dinagdee biyyattiin bakka bu'an kan akk telecom, annisaa, fi aviyeshiniitiin waldhakkeessa isaanii gara dhuunfaatti geddaruuf sochiin eegalamu himaniiru.
Haaluma qaama ajjandaa dinagdee fooyyeessutiinis motummaan Itoophiyaa haala invastimantii biyya alaa harkisuu irrattis cimee hojjataa jiran kan jedhan ministirri mummee, kunis bu'aalee gara biyya alaatti eergaman hedduumeessii fi carraa umuuf gahe olaanaa qabaata jedhaniiru.
Akka Dr Abiy jedhaniitti, baayyina lakkoofsa dargaggootaa biyyattii keessatti gudddataa jiruuf carraa hojii umuun dhimmaa motummaan dursi kennameef keessayi.
Irra jireessi carraa hojii ammoo kan dhufu danda'u dhaabbilee dhunfaa irraa ta'u ni amanna kan jedhan Dr Abiy, kanaafuu invastimantii biyyaa alaa sadarkaan isaanii olaanaa ta'ee gara biyyaatti harkisuun dhimmoota motummaan dursa itti kennuun hojjadhu ta'u himan.
Sochiilee kana dura haala invastimantii mijjeessuun taasifameenis bu'aa gaariin mirkanneefammuu dubbatanii, walitti dhufeenyi 'Compact for Africa' waliinii kunis invastimantii biyyoota G20 irraa dhufu cimsu iratti gumaata akka qabaatu amantaa isaanii ibsaniiru.
Kana malees, kutannoo fi kaka'umsa motummaan isaanii invastimantii biyya alaatii galu harkisuufi itti fufiinsuu qabdu ibsaniiru.
Jarman: MM Abiy walgahii Compact with Africa irratti hirmaataa jiru